Nzira dzokudzidza | Innovative Technology Solutions
Innovative Technology Solutions rinopa zvisarudzo zvakasiyana kana zvasvika pamadzimai ekudzidza. Zvichida iwe unoda kudzidza uri woga kana neboka, ITS inoita chero chinhu chinogoneka kuti unyaradze nekushanda.
Akazvitsaurira 1-on-1 Training
Innovative Technology Solutions dzakatsaurirwa 1 ON 1 nzira yekurovedza inobvumira 100% kugadzirisa mafundo & purogiramu yevadzidzi mumwe nomumwe.
Innovative Technology Solutions inopa maziso kumashure ekudzidzira chikoro kuvadzidzi vanobva kumativi ose enyika.Our solution inosanganisira zvose zvedzidzo dzakabatana mazano sevisa rubatsiro rwekufambisa ndege kune imwe nzvimbo.
ITS inonyanya kugadzirisa maitiro ekurovedza pa-site kuti iwe uwane nzvimbo yakananga nemidziyo yakajairika inovimbisa kuti iwe unofarira & nyaradzo.
Murayiridzi Led Online
Murayiridzi Led Online Training anosimbisa kuti ndiyo nzira yakanakisisa yekudzidza kubva kunyaradzo yeimba yako, hofisi kana chero nzvimbo yaunosarudza.